GBANYỤỌ TOUCHPAD NA LAPTỌỌPỤ - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Touchpad bụ ngwaọrụ na-emetụ aka bụ nke a kwadoro maka ngwaọrụ dị mkpirikpi, dịka laptọọpụ, netbooks, wdg. Touchpad na-aza aka aka aka n'elu. Ejiri ya dị ka onye na-anọchi anya (ọzọ) ka ọ na-emebu. Ọ bụla laptọọpụ nke oge a nwere ngwa nkwụnye aka, naanị, dịka o siri pụta, ọ dịghị mfe ịgbanye ya na laptọọpụ ọ bụla ...
Gịnị mere ị ga-eji kpochapụ akapad?
Dịka ọmụmaatụ, a na-ejikọta òké mgbe nile na laptọọpụ m ma ọ na-esi n'otu tebụl gaa na nke ọzọ - ọ dịtụghị. Ya mere, anaghị m eji touchpad ọ bụla. Ọzọkwa, mgbe ị na-arụ ọrụ na keyboard, ị na-emetụ aka na - emetụ aka - onye ọbụla na ihuenyo amalite ịkwa jijiji, họrọ ebe ndị na - ekwesịghị ịhọrọ, wdg. N'okwu a, ihe kachasị mma ga - ewezuga touchpad ...
N'isiokwu a, achọrọ m ịtụle ọtụtụ ụzọ esi gbanyụọ touchpad na laptọọpụ. Ya mere, ka anyi malite ...
1) Site na ọrụ igodo
N'ihe ọtụtụ ederede ederede dị n'etiti igodo ọrụ (F1, F2, F3, wdg) ikike iji gbanyụọ touchpad. A na-edekarị ya na obere ntanetị (mgbe ụfọdụ, na bọtịnụ nwere ike ịdị, na mgbakwunye na nkenji, aka).
Ịkwụsị touchpad - chọọ ka 5552g: n'otu oge pịa bọtịnụ FN + F7.
Ọ bụrụ na ị nweghị bọtịnụ ọrụ maka ịmepụ aka touchpad, gaa na nhọrọ ọzọ. Ọ bụrụ na e nwere - ma ọghị arụ ọrụ, ma eleghị anya, otu ihe kpatara ya:
1. Enweghị ndị ọkwọ ụgbọala
Ịkwesịrị imelite ọkwọ ụgbọala ahụ (dị mma site na saịtị ọrụ ahụ). Ịnwere ike iji usoro ihe omume ahụ maka ndị ọkwọ ụgbọala na-melite onwe ha:
2. Nkwụsị bọtịnụ ọrụ na BIOS
N'ime ụdị laptọọpụ ụfọdụ na Bios, ị nwere ike iwepu igodo ọrụ (dịka ọmụmaatụ, ana m ele nke a na laptọọpụ Dell Inspirion). Iji dozie nke a, gaa Bios (bọtịnụ bọtịnụ Bios: wee gaa ngalaba ADVANSED ma gee ntị na igodo arụmọrụ (gbanwee ọnọdụ kwekọrọ na ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa).
Laptọọpụ Dell: Kwado Igodo Igodo
Ọ dị obere. Ọtụtụ mgbe, n'okpuru bọtịnụ ahụ na-enweta ụfọdụ mpempe (crumbs) ya mere ọ na-amalite ịrụ ọrụ nke ọma. Naanị pịa ya ike ma igodo ahụ ga-arụ ọrụ. Na ihe omume nke malfunction keyboard - emekarị ọ naghị arụ ọrụ kpamkpam ...
2) Ịkwụsị site bọtịnụ na touchpad
Ụfọdụ laptọọpụ na touchpad nwere ntakịrị mkpanaka / gbanyụọ button (ọ na-abụkarị na akuku aka ekpe). N'okwu a, ọrụ mmechi ahụ na-ebelata na ya dị mfe (na-enweghị nkọwa) ....
HP Notebook - aka mgbapụ aka (aka ekpe, n'elu).
3) Site na ntọala òké na mpaghara nchịkwa nke Windows 7/8
1. Gaa na nchịkwa Windows, wee mepee akụkụ "Akụrụngwa na ụda", wee gaa na ntọala òké. Lee nseta ihuenyo n'okpuru.
2. Ọ bụrụ na ị nwere onye ọkwọ ụgbọala dị ala nke arụnyere na touchpad (ọ bụghị ndabara, nke Windows na-etinye mgbe mgbe), ịkwesịrị ịmalite ntọala. N'okwu m, aghaghị m mepee Dell Touchpad taabụ, wee gaa na nhazi elu.
3. Mgbe ahụ, ihe niile dị mfe: gbanwee igbe nlele ahụ kpamkpam ma gharazie iji akapad. Site n'ụzọ, n'ọnọdụ m, enwekwara nhọrọ iji hapụ ntụpọ aka ahụ, ma jiri "Gbanyụọ ọnụọgụ nke nkwụ". N'eziokwu, anaghị m enyocha ọnọdụ a, ọ na-adị m ka a ga-enwe ọnụọgụ random, ma ọ ka mma iji gbanyụọ ya kpamkpam.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na enweghi ntọala dị elu?
1. Gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ma budata "onye ọkwọ ụgbọala ala" n'ebe ahụ. Na nkọwa ndị ọzọ:
2. Wepụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ kpamkpam site na usoro ahụ ma gbanyụọ nyocha-akpaaka na nyocha-akpaaka ya site n'iji Windows. Banyere nke a - n'ihu na isiokwu.
4) Iwepụ ndị ọkwọ ụgbọala site na Windows 7/8 (mkpokọta: touchpad anaghị arụ ọrụ)
Na ntọala òké, enweghi usoro di elu maka igbochi touchpad.
Ụzọ na-enweghị atụ. Iwepụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ dị ngwa ma dị mfe, ma Windows 7 (8 na n'elu) na-arụpụta na-akpaghị aka ma tinyekwa ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaike niile ejikọrọ na PC. Nke a pụtara na ị ga-agbanyụ ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na ntinye aka ka Windows 7 ghara ịchọ ihe ọ bụla na folda Windows ma ọ bụ na weebụsaịtị Microsoft.
1. Esi gbanyụọ nyocha-akpaaka na wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na Windows 7/8
1.1. Mepee mmepe taabụ ma dee iwu "gpedit.msc" (na-enweghị akara ederede. Na Windows 7, na-agba ọsọ taabụ na Malite menu; na Windows 8, ị nwere ike mepee ya na nchịkọta bọtịnụ Win + R).
1.2. Na ngalaba "Nhazi Kọmputa", gbasaa "Templates Templates", "System" na "Ngwaọrụ Ntinye Ngwaọrụ," wee họrọ "Nkwụnye Ihe Ntinye Ngwaọrụ".
Na-esote, pịa taabụ "Zere itinye ngwaọrụ ndị akọwapụtara site na ntọala iwu ndị ọzọ."
1.3. Ugbu a lee igbe dị n'akụkụ nhọrọ "Kwado", chekwaa ntọala ma malitegharịa kọmputa ahụ.
2. Esi ewepụ ngwaọrụ na ọkwọ ụgbọala site na Windows
2.1. Gaa na panel nke Windows OS, wee gaa na taabụ "Akụrụngwa na ụda", ma mepee "Njikwa faili".
2.2. Mgbe ahụ chọta nanị ngalaba "Ụmụ oke na ngwaọrụ ndị ọzọ", pịa nri na ngwaọrụ ịchọrọ ihichapụ ma họrọ ọrụ a na menu. N'ezie, mgbe nke ahụ gasịrị, ngwaọrụ ahụ ekwesịghị ịrụ ọrụ maka gị, onye ọkwọ ụgbọala maka ya agaghị etinye Windows, na-enweghị ihe ngosi gị kpọmkwem ...
5) Gbanyụọ touchpad na Bios
Otu esi abanye BIOS -
Enwere ike ịkwado ụdị a ọ bụghị ụdị akwụkwọ edetu niile (ma na ụfọdụ ọ bụ). Iji gbanyụọ touchpad na Bios, ịkwesịrị ịga na ngalaba ADVANCED, na n'ime ya, chọpụta akara n'ime Ngwaọrụ Ntugharị - wee gụgharịa ya ọzọ na ọnọdụ [Onye nkwarụ].
Mgbe nke ahụ gasị, chekwaa ntọala ma malitegharịa laptọọpụ (Chekwaa ma wepụ).
Ụfọdụ ndị ọrụ na-ekwu na ha na-emechi akapad ahụ na ụfọdụ ụdị kaadị plastic (ma ọ bụ kalenda), ma ọ bụ ọbụna obere akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị mfe. Na ụkpụrụ, ọ bụkwa nhọrọ, ọ bụ ezie na m ga - enwere akwụkwọ a mgbe ọ na - arụ ọrụ. Na ndị ọzọ ihe, na uto na agba ...